भरत केसी - काठमाडाैं, ४ जेठ
सामान्य भाषामा एक औसत मान्छेले सामाजिक अभियन्तालाई समाजको अगुवा वा समाजमा सही काम र सन्देश प्रवाह गर्ने मान्छेका रूपमा चिन्छन्। आत्मानुसाशन र शिष्टताको प्राज्ञिक आम नागरिकले सामाजिक अभियन्ताबाट पनि सिक्ने गर्दछ्न्।
सामाजिक अभियन्ता यतिबेला नेपालका लागि अपेक्षाका थुम्का बनेका छन्। आम नागरिकले विभिन्न खालका अभियान्तालाई भरोसाका टापु पनि मान्ने गरेका छन्।
सामाजिक अभियान्ताले बोलेका कुरालाई नागरिकले महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा बुझेका छन्।
अभियान्ताहरूले सही गर्नेहरूका विरुद्धमा विष बमन गर्न थाले भने त्योप्रतिको धारणा हजारौं, लाखौं प्रशंसकको धारणा बनिदिन्छ।
सामाजिक अभियान्ता समाजको मार्गदर्शक हुन् । सत्य समाजको मानक पनि हुन्। साचो अभियान्ताले समाजलाई उत्प्रेरणा र ऊर्जा प्रदान गर्दछ। सही काममा संलग्न गराउने कोसिस गर्दछ।
सामाजिक अभियन्ताका क्रियाकलापले नागरिकमा कर्तव्यबाेध गराउँदै उनीहरूमा सामञ्जस्य र समाजमा एकता निर्माण हुनमा मद्दत पुग्दछ ।
एक अभियन्ताले के बोल्ने भन्ने कुराले सामाजिक रूपमा धेरै ठूलो अर्थ राख्दछ । गलत व्यक्तिलाई सही हो भन्दै प्रश्रय दिन थालियो भने र सही व्यक्तिका विरुद्धमा आगो ओकल्न थालियो भने समाज पूरै पंगु बन्न थाल्छ ।
याे त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हाे । नेपालमा सामाजिक अभियन्ताकाे विषयमा बहस गर्नैपर्ने बेला भएकाे छ ।
यिनले गलत गरे भनेर कसैले भन्नै पाइँदैन, बुरुक्क उफ्रिहाल्छन् । यिनलाई पनि उफ्रेर उचाइमा पुगिन्छ भन्ने भ्रम हाेला ।
उफ्रिँदैमा अग्लो ठाउँमा पुगिने भए सगरमाथामा मान्छेभन्दा पहिला भ्यागुता पुग्ने थियाे । यिनले जे गरे पनि आमनागरिकले ताली बजाइदिनपुर्ने !
अभियन्ता गलत निस्कियो, स्वार्थले गाँजियो, प्रायोजित हुन थाल्याे भने त्यो विज्ञापनजस्तै बन्छ । जसले आफू र आफ्ना विचार बिकाउनमा लगानी गर्दछ र विज्ञापनमा रमाउन चाहने मान्छे सस्तो लोकप्रियता चाहने खालको हुन्छ । जसको आयु स्वयम् व्यक्तिका गतिविधिले निर्धारण गरिदिन्छ ।
यिनीहरूमा एक प्रकारको 'बिलिफ सिस्टम' बनेको हुन्छ, अरुलाई गाली गर्नु र अरुको चरित्रहत्या गर्नु नै सामाजिक काम हो ।
ठूला माछा, साना माछा भनेजस्तै, सामाजिक अभियन्ताकाे पनि साइज हुने रहेछ । जसले गालीको डिक्स्नरी बढी रट्न सक्यो, त्यही ठूलो अभियन्ता । त्यसमाथि झन् अपाच्य र भल्गर खालका शब्द बोल्न सक्यो भने त त्यो मान्छे अभियन्ताको पनि महाअभियन्ता कहलिने रहेछ ।
कथित् अभियन्ताको उत्पत्ति नै विरोधमै उत्रिन मात्र भएको जस्तो । यिनको धनुषवाण जहिल्यै अरुको कन्पट्टीमा सोझिरहन्छ । यिनले खबरदारी गर्न विरोध गर्दैनन्, 'पब्लिक सेन्टिमेन्ट क्याच' गर्न विरोध गर्छन् । स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको सौन्दर्यता हो, यसमा कुनै शंका छैन । अरुको आलोचना गर्दै गर्दा के मर्यादा बिर्सेर अरुको चरित्र हत्या गर्न पाइन्छ ?
शिष्ट र सभ्य रूपले कसैको आलोचना र विरोध गर्नु अलंकार मानिन्छ । शालीन ढङ्गले गलत प्रवृत्तिको विरोध गर्नमा व्यक्तिको व्यक्तित्व झल्किन्छ । त्यो कुरा कथित् सामाजिक अभियन्ताले सिक्नु पर्दैन ? विकृतिकाे विरोध काइदाले गर्नु अलौकिकता हो । अरुको मानहानिमै उत्रिनु कदापि न्यायोचित हुँदैन । यो कसरी सामाजिक काम हुन्छ ?
एक अभियन्तामा कति धैर्यता, शिष्टता र विनम्रता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी भगवान् श्रीकृष्णबाट सिक्न सक्छाैँ । श्रीकृष्ण एक क्रान्तिकारी अभियन्ता थिए, गलतलाई गलत नै देख्ने र सहीलाई सही नै देख्ने ।
हरेक समस्याको समाधान सिर्फ मुर्दावादभित्र देख्नु मूर्खता हो । अभियन्ताले राजनीतिक विरोध गर्नकै लागि मात्र अभियान बनाउँछ भने कि त्यो अभियन्ता होइन, बरू कतैबाट परिचालित छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । बरु उचित यो हुन्छ कि उसले आफूलाई एक राजनीतिक विचारका रूपमा स्थापित गरोस्, न कि एक सामाजिक अभियन्ता ।
राजनीतिमा भएका असमझदारीका खाडल राजनीतिकै लेपनले टाल्न सकिन्छ । र, टाल्नु पनि पर्दछ । त्यो युक्तिसंगत रहन्छ । परिवर्तनका नाममा अभियान चलाउने तर विकल्प केही दिन नसक्ने अभियान पानीमा फालिएको अगुल्टोको झ्वाइँभन्दा फरक हुँदैन । धाई आमाको काम लोरी सुनाउने मात्र हो र ? कति वर्षसम्म बोलेर मात्र खाने ?
साँच्चिकै राजनीतिमा बेथिति र कुसंस्कार झाँगिएकै हो । तर, नानाथरी बोलेर मात्र समाजमा थप असन्तुष्टि बढाउनुभन्दा राजनीतिक मैदानमै उत्रिएको राम्राे । मैदानमा उत्रेपछि मात्र थाहा हुन्छ, कसले कति गोल गर्छ भनेर ।
सारा कुण्ठा त्यहीँ निकाल्नु र नेपाली जनतालाई निकास दिनु । अभियन्ताले बेतुकमा बोली मात्रै रहने हो भने समाज पनि भ्रममा रहन्छ । कुरा सिंह मार्ने गर्ने तर झिङ्गो पनि मारिएन भने कसको लुङ्गी कस्नु ?
सामाजिक अभियन्ताका विचार, अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले अहिले समाजमा धेरै ठूलो छाप परेको छ, सकारात्मक र नकारात्मक ।
अभियन्ताले ती क्रियाकलाप मात्र गर्नुपर्छ, जुन देश र समाजलाई सुधारतिर धकेल्न कामयाव बन्न सकाेस् । हामीले बोल्ने शब्द हाम्रा कर्म हुन् । बोल्नुअघि तौलिनु जरुरी छ । अन्यथा यसबाट सिर्जित दुष्परिणाम वक्ता स्वयम् मात्र नभई पूरै परिवेशका लागि हानिकारक हुन्छ ।
मान्छे मात्र त्यस्तो प्राणी हो, जसको विष दाँतमा नभएर उसले बोल्ने शब्दमा हुन्छ । अभियान राजनीतिक रिस साँध्ने र अकरमण्यता पैदा गर्ने किसिमकाे हुनु हुँदैन ।
हत्याभन्दा कैयौँ गुणा बढी दर्दनाक हुन्छ चरित्रहत्या । अर्काको मानहानि र चरित्रहत्या गरेर नै सामाजिक अभियन्ता बन्ने ध्याउन्नमा लाग्ने हाे भने यसले समाजलाई अधोगतिमै धकेल्ने हो । र, स्वयमका लागि पनि चारित्रिक घाटा हो ।
'धमिलो पानीमा माछा मार्न पोख्त' मानिस पनि अहिले सामाजिक अभियन्ताका रूपमा सलबलाइरहेका छन् । सेवा गर्नु, सामाजिक कार्यमा संलग्न रहनु पुण्यकाे काम हो । तर, राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न अभियन्ता बन्नु वाञ्छनीय ठहरिँदैन । अभियन्ता बनेर अर्थोपार्जन गर्न खोज्नु, विभिन्न समूह वर्गबीच क्लेश पैदा गराउनु, स्वार्थगत समूहका गलत मुद्दालाई उठान गर्नु, गलत प्रवृत्तिलाई मलजल गर्नु, नागरिकलाई विभाजन गराउनु, गलत आदर्शलाई समाजमा स्थापित गराउनतिर लाग्नु यी सबै अभियानका नाममा बदमासी हुन् ।
हुन त, सामाजिक अभियन्ता बन्नु चानचुने कुरा होइन । यसो भन्दै गर्दा सबै सामाजिक अभियन्तालाई एउटै घानमा हालेर भुट्न मिल्दैन । केही अभियन्ता यस्ता छन्, जसले उत्कृष्ट काम पनि गरेका छन् । त्यस्ता न्यायोचित काम गरिरहेका अभियन्ताको मनोबल बढाउनुपर्छ । आमजनतालाई दु:ख पर्दा पहिले अभियन्तालाई सम्झेका उदाहरण पनि छन् । एक सामाजिक अभियन्ताले बोल्ने भाषा र कल्चर सिङ्गो समाजले पच्छ्याउँछ । अभियन्ता समाजका धेरै मान्छेको 'रोल मोडेल' बन्नुपर्छ ।
शिष्टताविनाको विरोधले समाजले असल अभियन्ता जन्माउन सक्दैन । गलतको विरोध गर्नैपर्दछ तर अरुको भान्साको नुन खाएजसरी विरोध अभियन्ताले नगरुन् । को अभियन्ता कति पानीमा छ, त्यो त समयले छर्लङ्ग पार्ने नै छ ।
यू-ट्युबलाई खुलामन्च बनाई ट्रेन्डिङमा आइने लोभले तथानाम नबकून् । सत्यतथ्य कुरालाई अभियन्ताले अँगाल्न सकून् । नेपाली समाज जता लग्यो, उतै हुइँकिन्छ भन्ने कुराको हेक्का राखी सही बाटो मात्र अवलम्बन गरून् ।
सिद्धान्त कुनै पनि गलत हुँदैन तर त्यो कार्यान्वयन गराउने पात्र कस्ताे छ, त्यसैमा सबै कुरा निर्भर हुन्छ । अत: सामाजिक अभियन्ताको समय अरुको चरित्रहत्या गर्नमा व्यतित् नहोस् । यस्तो काम गरुन्, जसले सिङ्गो समाजलाई विरोधमा पनि सभ्यता र संस्कार सिकाउन सकाेस् । सत्यता बोकेका अभियन्ताका विचार र काम युगौँयुग बाँचिरहून् भगवान् श्रीकृष्णकै जस्ताे । गलत मनशाय बाेकेका अभियन्ताका विचारले कमिलाको आयु प्राप्त गरुन् ।
नि:स्वार्थ रूपले समाज रङ्गाउनेहरू असली अभियन्ता हुन् । तर, स्वार्थको बुई चढी अरुको चरित्रहत्या गरेर पेट पाल्नेहरू बेसरम सामाजिक अभियन्ता हुन् ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, जेठ ४, २०७७, १३:२०:००